ဥရောပစေလွယ်ကူမှာတော့တစ်ဦးကမသန်စွမ်းသူများနှင့်အတူခရီးထွက် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဥရောပစေလွယ်ကူမှာတော့တစ်ဦးကမသန်စွမ်းသူများနှင့်အတူခရီးထွက်
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 05/06/2020)
ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ရထားသွားလာကြဘူး? မီးရထားခရီးသွားလာလျှော့ပေါ့ဖြစ်ပါတယ်, လက်တွေ့ကျတဲ့နှင့် ကမ်းလှမ်းမှုသည်အခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းများရိုးရှင်းစွာမကိုက်ညီနိုင်မယ့်လူမှုရေးရှုထောင့်. သို့သျောလညျး, မသန်စွမ်းခရီးသွားအချို့မှစိတ်ညစ်စရာရှိနိုင်ပါသည်. ဤသည်ကိုသင်ပျော်စရာအတွက်ပျော်မွေ့လို့မရပါဘူးမဆိုလိုပါ, သော်လည်း. ဤဆောင်းပါးသည်ကိုသင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အချို့အခြေခံဒေသများကမ်းလှမ်း စီစဉ်တဲ့အခါမှာထည့်သွင်းစဉ်းစား သင့်ရဲ့ ရထားခရီးစဉ် ဒါကြောင့်ဥရောပတစ်မသန်စွမ်းတွေနဲ့ခရီးသွားလာလျော့နည်းစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ပါသည်.
အချို့သောအသုံးပြုနိုင်စွမ်းစိန်ခေါ်မှုများဆက်ဆက်ရှိပါတယ်နေစဉ်, အခြေခံအချက်ကိုပိုမိုသုတေသနပြုသင်ပြုသောကွောငျ့ဖွစျသညျ, ပိုမိုသုံးစွဲနိုင်ခြင်းနှင့်ပျော်စရာသင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်လိမ့်မည်! ဥပမာ; သငျသညျဟာကြူရဲ့အပျက်အယွင်းနီးပါးတူညီကြသည်ကိုငါတို့သိကြ၏ခဲ့ပါ ပွန်ပေ, ဒါပေမယ့်ဘီးတပ်ကုလားထိုင်-ဖော်ရွေများမှာ? နှင့်မသန်စွမ်းခရုဇ်ခရီးသည်ယူရန်မလိုပါကြောင်း “မြည်းလမ်းကြောင်းကို” ယင်းကမ်းပါးတက် Santorini ၏ဂရိကျွန်းသွားရောက်လည်ပတ်တဲ့အခါမှာ? သင့်ရဲ့အားလပ်ရက်တစ်ရုန်းကန်ဖြစ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး - သင့်အိမ်စာနှင့်သင့်ခရီးစဉ်အပြည့်အဝအသုံးမပြုနိုင်ဟိုတယ်တည်းခိုနှင့်ပြည့်စုံစေနိုင်သည်ပါဘူး, လက်လှမ်းအကြားသုံးစွဲနိုင်လမ်းကြောင်းများ ခရီးသည် ဆွဲဆောင်မှု, အံ့ဘွယ်သောသုံးစွဲနိုင် အတွေ့အကြုံများခရီးသွားလာ.
ဘယ်ရထားသင်တစ်ဦးမသန်စွမ်းတွေနဲ့ခရီးသွားနေလျှင်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်-A-ရထားပေါ်တွင်ကိုယူမှ?
သင်ရရှိနိုင်မျိုးစုံရွေးချယ်စရာရှိပါက (အချို့နိုင်ငံများတွင်တစ်ဦးတည်းသာရထားလမ်းစနစ်ကရှိ), မသန်မစွမ်းလိုအပ်ချက်နှင့်သင်၏ Travel လိုက်. အရှိဆုံးန်ဆောင်မှုပေးထားပါတယ်သောလေယာဉ်တင်သင်္ဘောကိုရှေးခယျြဖို့ကြိုးစား. အမည်ရ; boarding အကူအညီနှင့်လက်လှမ်း အိပ်ပျော်ကားများ. သန့်စင်ခန်းမှာလည်းသင်နှင့်တစ်ဦးအစောင့်အကြပ်သို့မဟုတ်လက်ထောက်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ဘီးတပ်ကုလားထိုင်လိုက်လျောညီထွေဖို့လုံလောက်တဲ့ကြီးမားတဲ့ဖြစ်သင့်. ထုံးစံအတိုင်း, မလိုအပ်သောအံ့သြဖွယ်ရှောင်ရှားရန်ကြိုတင်အဖြစ်အများအပြားမေးခွန်းများကိုသင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်ကိုမေး!
အထူးမသန်မစွမ်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူခရီးသွားတဦးတည်းဒေသကနေအခြားမှကွဲပြားစေခြင်းငှါ, စံ၏နံပါတ်ပေါ် မူတည်.; သင့်ရဲ့အထူးရထားပေါ်တွင်ကားများ, အမျိုးမျိုးသောမှာအဆောက်အ ဘူတာ သင့်ရဲ့လမ်းကြောင်းနှင့်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းအပေါ်ကိုပင်သင့်ရဲ့လေယာဉ်တင်သင်္ဘောမူဝါဒအတလျှောက်.
သင်ကလက်ခံရရှိတစ်ချိန်ကဂရုတစိုက်သင့်ရဲ့လက်မှတ်နှင့်ခရီးစဉ်စစ်ကြော. သင်သည်သင်၏အမျိုးမျိုးသောရပ်နားမှာအံ့သြမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုဒါကြောင့်သင်သည်၎င်း၏မူဝါဒများနှင့်ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အဆင်ပြေဖြစ်ကြောင်းသေချာ (ရေခြားမြေခြားခရီးသွားအထူးသဖြင့်လာသောအခါ).
ရထားပေါ်တွင်နဲ့ off ရယူခြင်းသိသာခရီးစဉ်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. သင့်ရဲ့ထွက်ခွာခြင်းနှင့်ဆိုက်ရောက်ဘူတာအဆင့်မြင့်ပလက်ဖောင်းသို့မဟုတ်ဘီးတပ်ကုလားထိုင် LIFT တပ်ဆင်ထားကြသည်သေချာအောင်. မသန်စွမ်းခရီးသွားစဉ်ဤကအများကြီးပိုလွယ်သည်သင်၏ရထားပေါ်တွင်နဲ့ off ရစေမည်.
လေကြောင်းလိုင်းများ၏အများစုနေတဲ့မသန်စွမ်းများနှင့်အလားအလာနှင့်အတူခရီးသွားလူဦးထားရှိရန်သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကိုပြုလိမ့်မည် အပိုအိတ် သူတို့လိုအပ်နိုင်ပါသည် (e.g. ဝှီးချဲ, အောက်စီဂျင်င့်ကားများ, စသည်တို့ကို). သင်သိလိုလျှင်သင်သည်အပိုဆောင်းအိတ်ကိုလိုအပ်ချက်များကိုလိုအပ်မယ့်, သင့်ရဲ့လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကိုကြိုတင်သိစေ.
မြို့အများဆုံးသုံးစွဲနိုင်အစိတ်အပိုင်းများနေ. ဒါကမသန်စွမ်းတွေနဲ့ခရီးသွားနေချိန်မှာသင့်ရဲ့ရထားခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်၏အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းများကိုတစ်ခုဖြစ်သည်. သင်တစ်ဦးအကြီးအလက်လှမ်းဟိုတယ်တွေ့ပြီစေခြင်းငှါ, သငျသညျလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာသင်မူကားအိမ်ရှေ့တံခါးမှထွက်လှိမ့် / အဘယ်အရာကိုတွေ့လိမ့်မည်? အားလုံးလမ်းညွန်အတွက်တောင်ကုန်းများနှင့်လှေကားရှိပါသလား? သငျသညျ cobblestones ကျော်လှိမ့်မှရပါလိမ့်မယ်? လက်လှမ်းစားသောက်ဆိုင်အနီးအနားမှာရှိပါသလား? ဟိုတယ်ရပ်ကွက်အတွင်းသုတေသနအရေးပါဒါဟာဖြစ်ပါသည်. သငျသညျကိုသုံးနိုင်သည် Google Maps ကို Street View ပွညျသူပွညျသား Lay ရဖို့, ထို့နောက်သင့်မေးခွန်းများကိုအတူဟိုတယ်အီးမေးလ်ပို့.
လူအပေါင်းတို့သည် admin ရဲ့ထဲကလမ်းနှင့်အတူ, အဆိုပါစွန့်စားမှုအနားယူနှင့်ပျော်မွေ့ဖို့အချိန်ယူဖို့သတိရပါ. သင်၏အပေါင်းအဘော်ခရီးသည်နှင့်တွေ့ဆုံရန်အချိန်အနည်းငယ်ကြာ, ပြတင်းပေါက်ကထွက်ကြည့်, သင်လမ်းကြောင်းခရီးအဖြစ်ဤမျှလောက်များစွာသောမတိုင်မီပြီနေစဉ်သို့မဟုတ်ရိုးရိုးအနည်းငယ်အဘို့ကိုဆုံးရှုံးရ.
သင်တို့တွင်အသင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေစာအုပ်ဆိုင်နိုင်ပါတယ် ဥရောပတိုက်တွင်အလျင်မြန်ဆုံးရထား အပေါ် Save-A-ရထား နီးပါးတိုင်းဦးတည်ရာကိုအတွက်အထက်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်3မိနစ်များ, မှာ စျေးအသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ်တွေနှုန်းထားများ နှင့် obnoxious ဘွတ်ကင်အခကြေးငွေများစိတ်သက်သာရာရ!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့?, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftraveling-disability-europe%2F%0A- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#မသန်စွမ်းမှု #ဝှီးချဲ ရထားခရီးသွား ရထားခရီးစဉ် traveltips
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား